उज्यालो खोज्ने कवि केदारनाथ र उनीभित्र लुकेको उज्यालो – Chitwan Post
उज्यालो खोज्ने कवि केदारनाथ र उनीभित्र लुकेको उज्यालो
नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा एउटा स्थापित नाम हो, केदारनाथ खनाल । विसं २००१ साल कार्तिक ७ गते गोरखाको ताक्लुङमा उहाँको जन्म भएको थियो । हाल उहाँको स्थायी बसोवास भने भरतपुर, चितवनमा रहेको छ । सातौँ दशक पूरा गरेर आठौँ दशकको यात्रामा रहनुभएका खनाल आफ्ना अनुजहरुलाई दिशानिर्देश गर्ने अग्रज साहित्य साधक तथा कुशल र क्रियाशील स्रष्टाको रुपमा हुनुहुन्छ ।
शिक्षण सेवाबाट निवृत्त हुनुभएकोले पनि होला उहाँ यस क्षेत्रमा कुशल द्रष्टाको रुपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ । उहाँका अनुभूतिका शब्द तरंग (२०६१), शिक्षा ः केही गन्थन केही मन्थन (२०६२), यात्राका स्पन्दनहरु (२०६५), स्मृतिका बिम्बहरु (२०६६ ), दुई हार एक लहर (२०७०) लगायत झन्डै एक दर्जन कृतिहरु प्रकाशित भैसकेका छन् । खनाल निबन्धकारका रुपमा समेत परिचित हुनुहुन्छ । सहित्यका अतिरिक्त समाजसेवामा समेत रूचि राख्ने काव्यकार खनाल बिभिन्न सहित्यिक तथा सामाजिक संघसंस्थामा रहेर उल्लेखनीय कार्य सम्पादनसमेत गरिसक्नुभएको छ । आगतका श्रेणीहरुका लागि एउटा गतिलो प्रेरणाको स्रोत रहनुभएका खनाल दर्जनभन्दा बढी संघसंस्थाहरुबाट सम्मानित र पुरस्कृतसमेत भैसक्नुभएको छ । मृदुभाषी खनाल विनम्र, मिलनसार, कर्तव्यनिष्ट, परिश्रमी, कोमल, पवित्र र सफा हृदय भएको व्यक्तित्वको रुपमा लोकप्रिय हुनुहुन्छ ।
आधुनिक नेपाली कवितामा प्रगतिवादी, प्रकृतिवादी र यथार्थवादी धारामा उहाँका कविताहरु देखिएका छन् । उहाँका कविताहरुमा भक्तिधाराको मिश्रणसमेत रहेको छ । कतिपय कविताहरुमा कवि हृदयको आध्यात्मिकता प्रस्ट पाउन सकिन्छ । नेपाल, नेपालको प्रकृति र संस्कृति, भेषभूषा, भाषा अनि नेपाली समाजको विकाशमा अमूल्य योगदान रहेका व्यक्तित्वहरुको जयजयकार उहाँका कविताहरुमा रहेका छन् । दीनदुःखीहरुका लागि सहानुभूतिका स्वरहरु समेत उहाँका कविताहरुमा मिसिएकाले उहाँलाई मनवतावादी कविका रुपमा समेत लिन सकिन्छ । आफ्ना जीवनका अनुभव, भोगाइ र अनुभूतिहरुलाई सरल र सरसरुपमा कविताको माध्यमबाट सार्वजनिक गर्न सक्ने सामथ्र्य उहाँमा पाउन सकिन्छ । उहाँका कविताहरुमा जीवनोपयोगी सारसमेत प्रशस्त पाउन सकिन्छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विसंगति र विकृतिहरुलाई व्यंग्यात्मकरुपमा प्रहार गरिएको छ । मानवले मानवको संहार होइन उपकार गर्नुपर्ने यथार्थता उहाँका कविताहरुमा पाइन्छ । आफूले जीवनमा साक्षात्कार गरेका स्थान, समय र पात्रहरुलाई पे्ररणाको रुपमा ग्रहण गर्दै अति सहज तरिकाले गरिएको स्मृति महिमा उहाँका कविताहरुमा पाइन्छ । उहाँका कविताहरुमा नारीवादी यथार्थतासमेत उद्घाटित भएको छ । आफूलाई मात्रै सर्वशक्तिमान सम्झिएर अग्रजहरु र अग्रजका योगदानको अवमूल्यन गर्ने आजको उग्र प्रवृत्तिप्रति उहाँका कविताले गतिलो झापड हानेको पाइन्छ । नेपाली भाषा, साहित्य, समाज, शिक्षालगायत देश निर्माणमा टेवा पु¥याउने सहिद, अग्रज एवम् समवयी रत्नविभूतिहरुको योगदानको कदरस्वरुप उहाँका कविताहरुमा श्रद्धा र भक्तिभाव रहेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशभन्दा पनि अहिंसावादी र सनातनवादीहरुको देशमा हिंसा हुर्कंदै जानुले नेपालमा मानव सभ्यता कठिन घुम्तीमा आइपुगेको सत्य उहाँका कविताहरुमा पाइन्छ । नेपालमा स्वघोषित नायकहरुको खलनायकीय व्यवहारले दण्डहीनता, हत्या, हिंसा, आतंक मौलाउँदै गएको र अझै मौलाउँदै जाने संकेत उहाँका कविताहरुमा पाइन्छ । नेपालमा हुर्कंदै गएको हत्या, हिंसा र अन्धकारलाई समाप्त पारी नेपाललाई प्रकाशित गर्न नेपाली जनताको एकता आवश्यक भएकोले कुनै पनि वर्गमा विभाजित नभईकन एकताबद्ध भएर अँध्यारोलाई परास्त पारी उज्यालोको खोजी गर्न बेर भैसकेकोले नेपाली जनतालाई अग्रसर गराउन उहाँका कविताहरु सक्रिय देखिएका छन् ।
कविको सम्मुनत नेपाल हेर्ने इच्छा छ । निरंकुश जहानियाँ राणा शासन, तानाशाही पञ्चायत र दण्डहीनताजन्य एवम् विकृतिजन्य बहुदलीय प्रजातन्त्रको तीतो अनुभवले कवि हृदयमा आघात पुगेको छ । नयाँ घर निर्माण गर्ने भन्दै पुरानो घर भत्काउँदा नेपालीहरुको अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्ने भन्दै आत्मरतिमा रमाउनुभन्दा दूरदृष्टि राख्न सके नेपाल र नेपालीको भलो हुने भाव प्रस्तुत कृतिमा रहेका कविताहरुले बोकेका छन् । माध्यम भाषाको अभाव खड्किएको समयमा आदिकवि भानुभक्तले नेपाली भाषालाई सबै नेपाली जनताको भाषा बनाउन गरिएको पहलकदमी प्रसंशनीय रहेको छ । आजको विसंगतिपूर्ण समाजमा बधू शिक्षाबाट केही सिक्नुपर्ने कुरा पक्कै रहेको कविको आशय रहेको छ । भानुभक्तको पालाको भोलिवादले आजसम्म पनि सरकारी अड्डा तथा अदालतहरुमा बलियोसँग जरा गाडेको तथ्य कविले उजागर गर्नुभएको छ । राष्ट्रलाई दाउमा थाप्नेहरुकै बोलाबाला रहेकोले हिजोको अमरापुरीजस्तो देश आज यमपुरीजस्तो बन्नुमा दानवसमानका नेताहरुको मह¤वपूर्ण हात रहेको कविको ठोकुवा रहेको छ । निर्भयका साथ चहलपहल गर्ने हिजोका चपला अबलाहरु आज निर्मलाका रुपमा लुछिएका, लुटिएका र मारिएका प्रसंग उजागर गर्दै दुराचारीहरु सत्तामा पुगेकाले अपराध सिस्नोको गाँजझै फैलिएकाले लामखुट्टे, उपियाँ, जुका र किर्ना बनी देश चुस्नेहरुविरूद्ध बोल्न । लेख्न भानुभक्तजस्ता महान् व्यक्तिहरुको आवश्यकता उहाँले दर्शाउनुभएको छ ।
महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले मानव, ईश्वर र प्रकृतिबीचमा रहेको त्रिपक्षीय सम्बन्धलाई देखाइदिनुभएकोले आजको नेपाली समाज त्यही मार्गमा हिँड्दा उत्तम हुने भाव कविले व्यक्त गर्नुभएको छ । भाषासाहित्यको क्षेत्रमा मात्र होइन राष्ट्रनिर्माणका लागि बीपी कोइरालाले पु¥याउनुभएको योगदनको कदर गर्दै राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद संस्थापित गराउने बीपीलाई समाजवादको नायकका रुपमा चित्रित गर्नुभएको छ । अग्रज नारी विद्यादेवी देवकोटालाई नमुना र प्रेरणाकी स्रोत मानेर आजका नारीहरु अग्रपङ्तिमा आए र ल्याउन सकेमात्र राष्ट्रनिर्माणमा टेवा पुग्ने कविको भनाइ छ । लमजुङका साहित्य साधक स्व. कोमलनाथ कोइराला, त्यस्तै काव्यमा गुरू पं लोकनाथ, राजेश्वर देवकोटा, सूर्यमणि अधिकारी, प्रेमविनोद नन्दन, काव्यनायकका रुपमा चर्चित सीताराम अधिकारीको योगदानको समेत चर्चा गर्नुभएको छ । शिक्षाविद्, भाषासाहित्यका साधक स्व. राजकृष्ण कँडेलको योगदानको चर्चा गरिएको छ ।
वर्तमान अवस्थाको दिशाविहीन विश्व र मानव सभ्यताको चित्रण गरिएको छ । द्रौपदीसमान राष्ट्रको बेइज्जत हुँदा सभासद्हरु रमाइरहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै दुष्ट रावणको राजजस्तो भएको अवस्थामा रामराज्यको कल्पना निरर्थक भएकाले जनताहरु उज्ज्यालोको प्रतीक्षामा रहन बाध्य भएका छन् । हजारौँ सहिदको प्राण आहुतिबाट हिजोको भुरे–टाकुरे राज्यहरुको एकीकरणपछि निर्मित अखण्ड नेपाल हाल संघीयताको अपव्याख्याले खण्डित हुने हो कि भन्ने त्रास कवि हृदयमा छ । कवि नेपाल अविभाज्य रहिरहोस् भन्ने कामना गर्दछन् । वर्षैवर्ष नववर्षको शुभकामना दिए पनि र लिए पनि शुभ हुन नसकेकोले कवि शुभ सालको प्रतीक्षामा छन् ।
स्थान परिचयको प्रसंगमा कविले चितवनको रत्ननगर, टाँडीबजारलाई स्वर्गको उपमा दिनुभएको छ । आजका पुस्तालाई हिजोको टाँडीको इतिहास छर्लंग पार्नुभएको छ । स्थान परिचयको क्रममा आफू बाल्यकालमा गोरखाको दर्शनडाँडामा पढ्न बस्दा अनुभूत गरेको भावनाहरुलाई काव्यमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । आँप चौर, त्रिशूली गंगा, फुडौरी, मझुवा, डुँडे, गोविन्दटार, चुवाटार, कल्टर अनि पाठसाले गुरू लोकनाथ, बाल सखा तथा सहयोगी अग्रजहरुको सम्मानपूर्ण स्मरणले त्यस्ता आत्माहरुप्रतिको श्रद्धाले कविमन भरिएको छ । स्थान परिचयकै क्रममा काव्यकार खनालले न्यूयोर्कको सेराक्युजवरपरको स्थानहरु अलौकिक भन्दै मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नुभएको छ ।
मौलाकाली मन्दिर, मनकामना मन्दिर, शिव वन्दना, फागु पूर्णिमाजस्ता धार्मिक महिमाले कवि हृदयको धर्मप्रतिको भक्तिभाव पूर्ण र पवित्ररुपमा प्रकाशित भएको छ । काव्यमा देश निर्माणका लागि योगदान पु¥याउने सञ्चारमाध्यमको भूमिकाको सम्मान गर्नुभएको छ ।
चितवनको प्राकृतिक छटाको चित्रण गर्दै चितवन नाम कसरी रहन गयो भन्ने प्रसंगमा चित्तबुझ्दो तर्क राख्नुभएको छ । काव्यमा ऋतु बयानका श्लोकहरु समेत समेटिएका छन् । कष्टकर हेमन्तको बयानमा कुँडिएका मनहरुलाई कविले वसन्त ऋतुको बिम्ब बिम्बित गरी नयाँ पिपिरा, मुनामा रमाउँदै गरेका कोइली चरी, भँवरालगायत अन्य विहंगमहरुले भाका छोप्दै गुराँस धइरो, काफल, ऐसेलु, डुमराइ, क्यामुनो अनि पाखाभरि फुलेका राताम्य लालीगुराँसको बयान गरी रंगदार बनाइदिनुभएको छ । नेपाली जनताको भाग्यमा ग्रहण लागेको उल्लेख गर्दै आजको समयमा पुनः तानाशाहहरु देखा परेकाले जनता सचेत हुनुपर्नेतर्फ काव्यकारले जोड दिनुभएको छ । आफ्नै घर जलाएर आगो ताप्न पल्केका युद्ध पिपासुहरुलाई सत्मार्गमा फर्कन अनुरोधसमेत गरिएको छ ।
नेपाल र नेपाली आफ्नै गोडामा उभिन नसक्दा छिमेकी ब्वाँसाहरुले दुःख दिने क्रम नरोकिएकाले विदेशी ब्वाँसाहरुको इसारामा चल्ने नेपाली ब्वाँसाहरुलाई स्वाधीन नेपालका पराधीन प्राणीको संज्ञा दिँदै अन्तिम लक्ष्य प्राप्त नभएसम्म नेपाली जनता अझै जाग्नुपर्ने काव्यकार खनालको उद्घोष एवम् जोड रहेको छ ।
काव्यमा संग्रहित कविताहरुमा मायाप्रेम, दया, मिलन, माफी, श्रद्धा, प्रशंसा, नैतिकता, धर्मप्रतिको आस्था अनि इमानदारिता बढी पाइन्छ । केही गीतिलयका लेखहरु यस काव्यमा समावेश भए पनि बाँकी कविताहरु शास्त्रीय छन्दको गुणले भरिएकाले काव्य ओजदार, दिलदार र बासनादार बनेको छ । शब्द अलंकार, रसजस्ता शब्दलालित्यले काव्य झनै उचाइमा पुगेको छ । बिम्ब, उपमा, अलंकार र प्रतीकको प्रयोगले काव्यलाई गहन बनाएको छ । संस्कृत, तत्सम, तद्भव र भासिक शब्दसंयोजनले काव्य कलात्मक बन्न पुगेको छ । लघु संरचना, वर्णनात्मक शैली र कथन पद्धति थप विशेषता बन्न पुगेका छन् । काव्य जीवनोपयोगी बन्न पुगेको छ । सरल र मीठो नेपाली भाषा अनि जनबोलीका शब्दहरुको प्रयोगले काव्यको स्तरीयता बढाएको छ । काव्यमा काव्यकार पूर्णरुपमा आस्तिक देखिनु काव्यको अर्को विशेषता बन्न पुगेको छ । ब्रह्मा, विष्णु र महेशबाट नै यस जगत्को सृष्टि, पालन र संहार हुने कुरामा कवि विश्वस्त हुनुहुन्छ । लोकका सबै–सबै खुसी र सुखी बनून्, कहीँकतै, कहिल्यै हत्या, हिंसा, अशान्ति नहोस् भन्दै सनातनवादीहरुको मूलमन्त्र सर्वे भवन्तु सुखिनः को उद्घोषले पूर्वीय सनातन संस्कृतिको सभ्यता यस काव्यको थप विशेषता बन्न पुगेको छ । नारी सृष्टिकी मुहान भएकीले नारीको सधैँ पूजा गर्नुपर्ने, विश्वशान्ति समृद्धि र विकासका लागि नारीहरुले नै नेतृत्व लिनुपर्ने कविको धारणाले काव्यमा नारीवादी चिन्तन अर्को विशेषता बन्न पुगेको छ । काव्यकारले काव्यमा राष्ट्रवादी चिन्तनलाई बेजोडरुपमा प्रस्तुग गर्नुभएको छ । वर्तमान समयमा नेपाली जनजीवन, शासनव्यवस्थाका दृष्टिले अँध्यारोमा फसेकाले उज्यालोको खोजीमा रहेको नेपाली जनमनका भावनाहरु काव्यभरि नै छताछुल्ल भएकाले काव्यको शीर्षक ‘उज्यालोको खोजी’ले पूर्णरुपमा सार्थकता पाएको छ ।
समग्रमा काव्य अनुपम बन्न पुगेको छ । जीवन–जगत्का भोगाइहरुलाई यति सरल र मिठासपूर्ण रुपबाट पस्कन सक्नुले कविको काव्यशिल्पताको स्तरीयता उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । अनुष्टुप छन्दका कविताहरुले भरिएको काव्यमा गीतिलयका केही लेखहरु समावेश नगरिएको भए सुनमा सुगन्ध पो हुने थियो कि ? हुन त, नेपाली शब्दकोषको भकारी ठूलो छ, तैपनि नेपाली भाषाको संरक्षणमा योगदान पु¥याउने काव्यहरुमा अमानत, क्यान्सरजस्ता नगन्य आयातित शब्दहरुको प्रयोग नभएको भए अझै उत्तम हुनेथियो । तत्सम शब्दहरुको बाक्लो प्रयोगले सामान्य साहित्यप्रेमी पाठकहरुलाई काव्यका केही प्रसंग बुझ्न कठिन हुने कुरा साँचो हो भन्दा काव्यलाई अन्याय हुने छैन । आगामी पुस्ताका लागि यस काव्य मार्गदर्शन र उपदेशले भरिएको अनमोल संग्रह बन्न पुगेकोले नेपाली साहित्यको भकारीमा यस काव्यले उच्च स्थान पाउने कुरामा शंका छैन । जाँदाजाँदै नेपालका युद्धरत पक्षहरुलाई काव्यकार खनालले गर्नुभएको प्रश्न राख्दै बिदा हुन्छु ।
एउटा भाइ जंगलमा
अर्को भाइ सहरमा
साढे बनी जुद्धै यहाँ
सोझा बाच्छा मा¥यौ किन ?
स्क्रव टाइफस परीक्षण शुल्कमा मनोमानी, छ सय पर्ने कीटलाई तीनहजार असुली
भुजेलको श्रद्धाञ्जली सभा